केहो जुम्बा डान्स? यस्ता छन् यसका फाइदा - Everest Dainik - News from Nepal
केहो जुम्बा डान्स? यस्ता छन् यसका फाइदा
काठमाडौं । जुम्बा डान्स गर्दै गरिने फिटनेस हो । यसमा शिरदेखि पैतालासम्मको अभ्यास हुन्छ । यसका ६–७ विधा हुन्छन् । ती सबै विधा जान्न आवश्यक छ । तीन महिनासम्म जुम्बा डान्स गरेमा ६ देखि ८ केजीसम्म तौल घट्छ । दैनिक जुम्बा डान्स गर्नाले आनन्द मिल्छ ।
-जुम्बा डान्स आठ तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । कोलम्बियन डान्स, मेरेन्गे, साल्सा र रेगिटेन आदि ।
-सुरुम वार्मअप गरिन्छ । करिब ११ देखि १२ मिनेटसम्म वार्मअप हुन्छ । यो क्रममा हल्का शरीरलाई तताउने गरिन्छ । हातखुट्टा चलाएपछि सबै शरीर सेटअप हुन्छ ।
-संगीतको तालमा लगभग ११ देखि १२ मिनेटसम्म नाच्ने गरिन्छ । यसो गर्दा शरीरका विभिन्न अंग सक्रिय हुन्छन् ।
-जुम्बा डान्समा प्रायः विदेशी गीत–संगीत बजाइन्छ । प्रायः १७–१८ वटा कोलिम्बियन गीतमा नाचिन्छ । अन्तिममा ५ मिनेटजति कुलडाउन हुन्छ ।
-त्यसपछि १ घन्टाको क्लास सकिन्छ । यो अवधिमा पसिनै–पसिना भइन्छ ।
कसलाई उपयोगी ?
-जुम्बा डान्स जुनसुकै उमेरकाले पनि गर्न सक्छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय जुम्बा डान्सप्रति महिला बढी आकर्षित रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि ३० वर्ष कटेका गृहिणी बढी छन् । विशेषगरी, बेफुर्सदीका कारण योगा र व्यायामका लागि समय निकाल्न नसक्ने महिलाले जुम्बा डान्स क्लास जाने गरेका छन् ।
-बच्चाहरूले पनि जुम्बा डान्स गर्छन् । त्यो अलि फरक छ । उनीहरूलाई हाई स्केलमा डान्स गराउनुहुँदैन ।
-मुटुलाई स्वास्थ राख्न सकिन्छ ।
-उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोकथाम हुन्छ ।
-मोटोपना घटाउँछ ।
-शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि आवश्यक ।
-दैनिक जीवनमा आइपर्ने तनावबाट मुक्त भइन्छ ।
-पछिल्लो समय अलिअलि नाच्न जान्नेहरूसमेत आफूलाई इन्स्ट्रक्टर भन्दै जुम्बा डान्स सिकाउने गर्छन् । यसले विकृति ल्याएको छ । गलत इन्स्ट्रक्टरबाट सिक्नाले शरीरमा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । ३० वर्ष कटेपछि शरीरका विभिन्न भागका हड्डी खिइने, हाडजोर्नीमा समस्या आउनेसमेत हुन सक्छ । हातखुट्टा घुमाउन र राम्रोसँग मिलाउन नजानेमा थुप्रै समस्या आउन सक्छन् ।
-यदि हात र घुँडा दुख्ने समस्या भएमा होसियारीपूर्वक जुम्बा डान्स गर्नुपर्छ ।
-जुम्बामा डान्सका आ–आफ्नै विधा छन् ।
-तिनलाई फलो गर्न जान्नुपर्छ । राम्ररी फलो गर्न सकिएन भने फाइदा मिल्दैन । एक दिन क्लास जाने अर्को दिन नजाने गर्नुहुँदैन । नियमितता हुनुपर्छ ।
ट्याग्स: Zumba Dance